စိမ့်စမ်းရေ: နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးသမား တောပုန်းကြီး ဗိုလ်စံဖဲ
နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေးသမား တောပုန်းကြီး ဗိုလ်စံဖဲ
ဤသို့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် မတရားပြုခံရသဖြင့် စိတ်နာကျည်းနေသော စံဖဲသည် ထောင်မှလွတ်၍ သာဂရရွာရောက်နေသော စံဖဲအား ရာဇ၀တ်အုပ် ဦးညီမောင်သည် ၁၉၂၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီး၍ စစ်ဆေးရန် သာဂရသူကြီး ဦးလာဘအိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်။ သူကြီးကတော် ဒေါ်နန်းနွယ်က ရာဇ၀တ်အုပ်စားရန် မြေပဲလှော်နှင့်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းချထားရာ စံဖဲက ဆာဆာနှင့် ကောက်ယူစားလိုက်ရာ ဤတွင် ရာဇ၀တ်အုပ်ဦးညီမောင်က “ဟေ့ကောင် ဒါလူစားတဲ့အစာကွ မင်းလိုတရားခံလူမျိုး စားဖို့ ချထားတာမဟုတ်ဘူး” ဟူ၍ ငေါက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ရာဇ၀တ်အုပ် ဦးညီမောင်က စက္ကူတောင်းသဖြင့် သူကြီးကတော် အခန်းထဲဝင်သွားစဉ် စံဖဲသည် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူနှင့် နှစ်တောင်ကွာလောက်တွင်ရှိသော သူကြီးထောင်ထားသည့် ဓါးကိုယူ၍ လက်ထိပ်ခတ်ထားသော လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်၍ ဦးညီမောင်ကို ခုတ်သတ်လိုက်သည်။ အစောင့်အဖြစ် လိုက်ပါလာသော ပုလိပ်ငကြွယ်မှာလည်း စံဖဲ၏ဓါးချက်မိ၍ ထွက်ပြေးသွားသည်။
ထိုနေ့မှစ၍ စံဖဲသည် ၀ရမ်းပြေးတောပုန်းဖြစ်သွားလေ၏။ ထိုအခါ ဗန္ဓုလသတင်းစာတိုက်က အထူးသတင်းထောက်များလွှတ်၍ စံဖဲသတင်းကို ဗန္ဓုလတွင် အပတ်စဉ် တခမ်းတနား ထည့်သွင်းရာ စံဖဲသတင်းသည် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတော့သည်။ အစိုးရက စစ်ပုလိပ်များလွှတ်ကာ စံဖဲကို ဖမ်းခိုင်းသည်။ မမိ။ ဖမ်းလေ၊ မမိလေဖြစ်၍ တဖြည်းဖြည်း ကြာလာသောအခါ စံဖဲသည် ဆုငွေ ၅၀၀၀ ထုတ်ထား ရသော ၀ရမ်းပြေးတောပုန်းဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့ စံဖဲသတင်းကြီးနေစဉ် ဗန္ဓုလသတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တို့က ‘စံဖဲဒိုင်ယာရီ” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ‘စံဖဲဇာတာဗေဒင်ဟောစတမ်း” ဟူ၍ တဖုံ စံဖဲသတင်းကို အပ်ချစရာမကျန်အောင် တခမ်းတနား ရေးကြလေသည်။ စံဖဲဓါတ်ပုံ၊ စံဖဲမိခင်ဓါတ်ပုံ၊ စံဖဲနေရစ်ခဲ့သော ကျောင်းပုံ စသဖြင့် စုံလှသည်။ ပုသိမ်ဦးဘသော် ဆိုသူကလည်း အင်္ဂလိပ်ဒဏ္ဍာရီပါ ‘တောပုန်းကြီးရော်ဘင်ဟု’ အကြောင်းကို ဘာသာပြန်၍ ဗန္ဓုလသတင်းစာတွင် အပတ်စဉ်ထည့်ကာ စံဖဲကို ချီးမြှောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် လူဆိုးကြီးစံဖဲနှင့် ပုလိပ်ရာဇ၀တ်ဆိုင်ရာဘွဲ့ လေးချို့း’ ခေါင်းစဉ်တပ်၍-
သြော်… ကြငှာန်းမအေးပေဘူ့၊ ၀ရမ်းပြေးကိုလ၊ ဖမ်းပေးသူမပေါ်လာသဖြင့်၊ အော်ခါသာ ပုလိပ်မင်းတို့ရယ်က၊ ကြော်ငြာစာ တဆိတ်နှင်းတဲ့ပြင်၊ စိတ်တွင်းဘလောင်ဆူသည့်၊ အမောင်လူစုံထောက်ကြီးတို့မှာပဲ အချောင်ယူကာ နုံသလောက်ခရီးမှာတော့၊ တုန်ကြောက်၍ ငြီးပုံတကယ်ဟာမို့၊ နတ်ရွာမှာ တညံညံသဲပေတဲ့၊ ထယ်ထယ်ဝါ၀ါ ငစံဖဲကိုလ ဆလံကြဲကာ မယှဉ်နိုင်ဘူ့၊ တမင်မှိုင်ကာ ခက်လှသည့်အခင်းတွေနှင့်၊ ရင်ဆိုင်လာလျှင် လက်ရမခွင်းတာကြောင့်၊ သတင်းမလှလို့ ပြည်နဂရာမှာ နော်ဗျာ၊ သြော် အရင်းပထမတော့ ဖျင်းကြပေတာ’ ဟူ၍ ရေးသားကာ စံဖဲကို ဂုဏ်ပြုထားလေသည်။
ထို့နောက် “ ဆာဂျေအေမောင်ကြီးနှင့် စံဖဲဘွဲ့ လေးချို့း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် -
“အခါတာရှည်တဘောင်သံမလွဲပေဘူ့၊ အညာသာစည်မှာ မောင်စံဖဲရယ်က၊ ဗြောင်အမှန်ကြဲပါလို့၊ နှိပ်စက်လျှင် အတန်ကြာ (အို့… ဗျာ) အောင်လံမစွဲတာကြောင့်၊ ပုလိပ်ဘက်မှာဖြင့် မကြံသာ။ သြော်…. ၄င်းအတွက်ကယ်ကြောင့်၊ ဒေါင်းကနက်များဖြင့်၊ မောင်းနှက်သလို ဆူဆူညာ၍ လူတကာစိတ်မှာ မအေးအောင်ပ၊ ကူပါ ကူပါ ဘိတ်စာပေးသည်သို့၊ ထိတ်စရာအရေးနော်ဖန် လာကြုံတဲ့အပြင်၊ မြန်မာဘုံမှာ ပါဝါဒြပ်တွေနဲ့၊ ပြန်ကာလှန်ကာ တုန်သလို ဆာအမတ်ရယ်က၊ ရွာရပ်တွင် တခါမွှေသည့်၊ အညာပြေ “ငစံဖဲ” ကိုလ၊ (မင်းတို့ပုလိပ်) မဆလာတွေဟာ အမှန်မရဲတယ်လို့၊ ရန်ပွဲလိုအော်ခါ မန်၍ ကြော်ငြာအတန်တန်ချ လျက်နှင်းတာကြောင့် စလျော်ရှာပြန်ငါ့လက်ထက် တွင်းမှာဖြင့်၊ စိတ်ပျက်ပါတယ် သိပ်ရှက်စရာ သတင်းရယ်လို့၊ အကျဉ်းတွေသမို့ ဗဟိုနာဂရာမှာ နော်ဗျာ သြော်…. ယွန်းဓလေ့ငယ်နှင့် ဖျင်းကြပေတာ” ဟူ၍ စံဖဲအရေးကြောင့်
ထိုမျှမကသေး ဗန္ဓုလသတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင် ဗန္ဓုလဦးစိန်က ‘သတိုးစိန်’ ကလောင်ခွဲဖြင့် စံဖဲအကြောင်းကို ၀တ္ထုရေး၍ ချီးမြှောက်ခဲ့ပြန်သည်။ စံဖဲဝတ္ထုကြော်ငြာပုံကိုကြည့်ပါ။ “မရွံ့မထိတ်၊ ခြင်္သေ့စိတ်နှင့်၊ ထိတ်ထိတ် ကြဲ သတ္တိခဲ၊ အာဇာနည်စံဖဲဝတ္ထု” ဟူ၏။ (၁၄-၁၁-၂၇) ထုတ် ဗန္ဓုလသတင်းစာတွင်လည်း “စံဖဲဘယ်မှာလဲ” (ဒုတိယတွဲ) ၀တ္ထုကြော်ငြာကို တွေ့ရသေးသည်။
ထိုမျှမကသေး ဆရာကျင်ခဲ(ရွှေတိုင်ညွှန့်ဖခင်)နှင့် နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်တို့ကလည်း “စံဖဲသီချင်း” ကိုရေး၍ တိုင်းပြည်ကို ဖြန့်လိုက်သေးသည်။ ဤသို့ ဖြင့် စံဖဲသတင်းသည် တောရွာအနှံ့ပျံ့၍ စံဖဲသီချင်းသည် လူထုနှုတ်ဖျားဝယ်သီးနေတော့သည်။ စံဖဲကို ကရုဏာဖြစ်သူတို့ ကလည်း မရှား။ “သင်းကလေး မတရားတာကို မခံနိုင်လွန်းလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ” ဟူ၍ ကရုဏာပွားကာ ခွင့်လွှတ်ကြလေသည်။ လူထုက စံဖဲသွားလာလှုပ်ရှားမှု ကို ၄င်းအား အန္တရာယ်ဖြစ်မည်စိုး၍ သိုဝှက်ထားကြသည်။
ထိုသို့ စံဖဲကို ကရုဏာဖြစ်သူတို့အထဲတွင် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းလည်း ပါလေသည်။ စံဖဲ၏ သတ္တိကို ချီးကျူး၍ ဇာတိမာန်လည်း ဖြစ်ရလေသည်။ ထိုအခါ ဆရာကြီးသည် စံဖဲနှင့် ပတ်သက်သော “ပုံတော်နိုင်မော်ကွန်းဋီကာ” တွင်လည်းကောင်း၊ ‘တရုတ်ဒီပနီ ဆောင်ပါးများ” တွင်လည်းကောင်း စံဖဲအကြောင်းဆောင်းပါးကို ရေးလေသည်။ ဆရာကြီးသည် ဓူဝံမဂ္ဂဇင်းတွင် ‘စုံတော်မူမှာတမ်း’ အမည်ဖြင့် စံဖဲ၏ မျိုးရိုးနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းကို ရေးသား၍ ဇာတိမာန်ဖြစ်လိုက်သေးသည်။
ဆရာကြီးသည် “လူမှာအမျိုး၊ ကြက်မှာအရိုး” ဟူသော စကားအတိုင်းမျိုးရိုးကိုအလွန် လေးစားသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆရာကြီးပိုမိုလေးစားဟန် ရှိသော မျိုးရိုးမှာ ရှေးမြန်မာမင်းလက်ထက်က အမှုထမ်း၊ အရာထမ်း၊ မင်းမျိုး၊ မှူးမတ်မျိုးတို့ဖြစ်သည်။ မည်သူသည် မည်သည့်အမတ်ကြီး၏ အဆက်အနွယ်ဖြစ်သည်ဟု ကြားလိုက်ရလျှင် ဆရာကြီးသည် ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်ကို လွမ်းလာတတ်လေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြို့လုလင်မှ အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ခဲ့သော ဦးမင်းရောင်၏ မြေးဖြစ်သည်ဟု ကြားလိုက်ရသောအခါ ဆရာကြီးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တော်လှန်ရေးမျိုးရိုးပေပဲဟု ပိုမိုကြည်ညိုလေးစားလေသည်။ ဆရာကြီးစိတ်သည် မြန်မာ့သမိုင်းကို နှစ်သက်သောစိတ်၊ ထို့အပြင် သမိုင်းပါ ရှေးမြန်မာများကို လေးစားသောစိတ် အားထားတတ်သော စိတ်မျိုးဖြစ်လေသည်။
“သြော်… သရဲဘော်သွေးဟာက မနဲသောအကလေးပေပေါ့၊ မဲတောမွေးရှာသနဲ့ ရှေးမြန်မာအခါရှိစဉ်က၊ ဇာတိအမျိုးပါ ရိုးရာစစ်ပြန်တော့၊ မြန်မာပြည်ကိုးစရာအဆိုးမှာတကယ်လို့၊ သတိုးမဟာဓမ္မရာဇာအဆူဆူနှင်း အပ်ဘူးပေတဲ့၊
သွေးအခြေအနေစစ်စရာ ကရိုဏ်းတွေနှင့်၊ ဝေးတမြေခေတ်သာတဲ့ စစ်ကိုင်းဆီက မစ္စတာမှိုင်းကြီး ဟို့နှယ်သည့်နှယ် ကြားရပြန်တော့၊ တပည့်သူငယ်အားမှာအပြစ်ဘယာမညှိုးစေဘို့၊ မေတ္တာပို့ကာ ဆရာသနားမိတဲ့ပြင်” ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။
ယင်းအရပ်က အချို့ရွေးလိုက်တော့၊ (သြော်) အတင်းသတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ သွေးရယ်ဆင့်၊ (ကိုစံဖဲမှာတောင်၊ မြင်းတပ်ဗိုလ်မြေး။”
(၅) L.U.G. Tripp, Boh San Pe and Other Glimps of life in Burma, Bombay, Mody’s Diamond Printing Works,1944.
facebook မှ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။